कुमार नगरकोटी - कान्तिपुर समाचार
कुमार नगरकोटीका लेखहरु :
सभामुख : माननीय सदस्यहरु ! प्रतिनिधि सभाको यो ग्यालरी बैठकमा आज हामीले सरकारद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा हङकङका फिल्म सर्जक वोङ कर-वाईको रोमान्टिक ड्रामा 'इन द मुड फर लभ' हेर्‍यौं । जसलाई तपाईंहरु सबैले रुचाउनु भयो भन्ने मेरो ठहर छ । अब हामीसँग शून्य समयको प्रहर छ । तसर्थ फिल्मबारे आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नका निम्ति म सर्वप्रथम माननीय श्री गगन थापालाई डायसमा निम्तो गर्छु ।
गुप्तचरको गलगाँड, रेडियो र हेलिप्याड
साँझ, पख ! गुप्तचरले सोध्यो– तँ को ? तेरो नाम के ? मैले आफ्नो नाम र थर बताएपछि गुप्तचर जोडजोडले हाँस्न थाल्यो । बुझिल्याउँदा मेरो थर–नगरकोटी–सुनेर ऊ त्यसरी हाँसेको रहेछ ।
चङ्गाजस्तो मन आकाश–गङ्गातिर उडिजान्छ
फिल्म : द म्यान विदाउट ग्राभिटीभाषा : इताल्वी